Ministeran'ny Fizahantany : Fanadiovana faobe
Ministeran’ny Fizahantany : Fanadiovana faobe
Posted on janvier 10, 2018 janvier 10, 2018 by dsi
Andro natokana ho an’ny fanadiovana faobe ny andro Alarobia 10 Janoary 2018 araka ny « décret », laharana faha 2017-1156 tamin’ny 12 desambra 2017 navoakan’ny Fanjakana.
Tsy diso anjara tamin’izany ny teto anivon’ny Ministeran’ny Fizahantany, satria dia Andriamatoa Roland Ratsiraka, Ministry ny Fizahantany mihitsy, no nitarika ny fanadiovana zay notronin’ireo mpiara miasa aminy rehetra, teto amin’ny toeram-piasana eto Tsimbazaza. Tsy vitan’ny teo anivon’ny Ministera ihany fa mbola nitohy teo amin’ny manodidina ny ministera, ny arabe ary tonga hatrany amin’ny “Parc Tsimbazaza” ny fanadiovana.
Samy niezaka nanadio avokoa ny faritra ivelany sy anatiny toeram-piasana ny rehetra. Nanala ny lobolobo teny amin’ny manodidina, mba ho fanomezana ohatra ny olona rehetra.
Nanentana ny tsirairay Andriamatoa Ministra amin’ny fahadiovana manomboka amin’ny isam-batan’olona, ny toeram-piasana, satria araka ny voalazany dia “ Ny Fahadiovana no mitondra ny Fahasalamana, ary ny Fahasalamana no antoky ny Fampandrosoana. Mitaky finiavana avy amintsika trisairay izany, tokony hotohizana hatrany ary atao mandavan-taona. Ny fako dia tokony ariana eny amin’ny toerana fanariam-pako na DABA PAKO.”
Nanararaotra ihany koa ny tenany niarahaba sy nirary soa ny mpiara miasa aminy tsy ankanavaka, amin’izao fahatratrarana ny taona vaovao 2018 izao. Hitohy hatrany anie ny hezaka…
Tsara ho marihina moa fa tamin’ny faran’ny taona lasa teo dia nihaona manokana tamin’ ny Praiministry ny Nosy Maurice, ny Ministry ny Fizahantany Malagasy : nanohy ny ezaka hatrany amin’ny fandresen-dahatra ny hamerenana indray amin’ny laoniny ny fahatongavan’ny mpizahantany eto Madagasikara.
Fiaraha-mientana amin’ny traboinan’ny rivo-doza « AVA »
Madagascar: une des destinations préférées